Rimai mbeu itsva: Seed Co | Kwayedza
Rimai mbeu itsva: Seed Co
21 Nov, 2014 - 00:11	 2014-11-20T19:33:58+00:00 2014-11-21T00:00:49+00:00 0 Views
VADENIAS Zaranyika (vechina kubva kurudyi) vachigashidza mbeu yechibage neyemapfunde kune vamiriri vemasangano nezvikoro zvakasiyana apo Mai Felistus Ndawi (vechitatu kubva kurudyi) vanova finance director kuSeed Co naVaTiri Vushemasimba (kurudyi) avo vanove quality assurance manager vainge vakatarisa svondo rapera muHarare.
KAMBANI huru inouchika mbeu munyika muno yeSeed Co yakakurudzira varimi kuti mwaka uno vamboedzawo kurima mhando dzembeu itsva dzechibage idzo dzichangoburwa sezvo dzichipa goho guru rine pundutso. Mukuru wekambani iyi vanova managing director, VaDenias Zaranyika, vakataura mashoko aya pamabiko avakaitira vatori venhau muguta reHarare svondo rakapera.
Vakakurudzira varimi kuti varime mbeu yavo itsva inosanganisira SC 301, SC529 neSC 641 iyo vakati inopa goho guru kana ikarimwa nemazvo.
“Kambani yedu ine mbeu itsva iyo tiri kuti varimi ngavarime mwaka uno vachisanganisa nedzavagara vachirima kare seSC 513, SC 637, SC727, SC 533 nedzimwewo,” vakadaro VaZaranyika.
“Hatidi murimi anongotenga chero mbeu yaanenge aona asi kuti ngaataurirane nevarimisi vake oziva mbeu chaiyo yekutenga nekuti uchatevedzera murimi wekuMhondoro wawaona akatakura mbeu yake wonotenga iyoyo iwe uchibva kwaMuzarabani. Nzvimbo idzi dzakasiyana zvachose saka dzinoda mbeu yakasiyana,” vakadaro. Mukati membeu itsva idzi vakati vane yeyellow yeSC 402 iyo vakati inoita zvakanaka zvikuru.
“Goho redu hariwirirane nezvirimwa zvinenge zviri muminda yedu saka tinoti kuvarimi goho repahekita rikabuda zvakanaka nyika yedu inokwanisa kuguta,” vakadaro. Vakazokurudzirawo kurimwa kwezvimwe zvakaita sesoya bhinzi nemapfunde izvo vakati zvinobatsira kuwanisa nyika mari pamwe chetewo nekudya.